I-Chrome 92 ifika nokuthuthuka ekutholeni ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, ukuhlukaniswa kwesayithi nokuningi | Kusuka kuLinux
Okuhle | 23/07/2021 22:16 | Aplicaciones
Zimbalwa izinsuku ezedlule ukukhishwa kwenguqulo entsha yeGoogle Chrome 92 kumenyezelwe okuvelele manje kufaka phakathi i- ukuthola ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi kufinyelela ezikhathini ezingama-50 ngokushesha kunenguqulo yakamuva yesiphequluli.
Futhi kungenxa yokuthi kusheshe kutholakale izindawo zokuheha, ukuthuthuka kobuchwepheshe bokucubungula izithombe kungabonwa I-Chrome ijwayele ukuqhathanisa amaphrofayili wombala wamawebhusayithi avakashelwe namaqoqo amasiginali ahlobene namakhasi okufika kobugebengu bokweba imininingwane ebucayi
Ngisho, I-Chrome ihlola isethi yamasignali mayelana nekhasi ukubona ukuthi iyafana yini namasayithi obugebengu bokweba imininingwane ebucayi. Ukwenza lokhu, i-Chrome iqhathanisa iphrofayili yombala wekhasi elivakashelwe, okungukuthi, ububanzi nobuningi bemibala ekhona ekhasini, namaphrofayili wombala wamakhasi amanje. Isibonelo, esithombeni esingezansi, siyabona ukuthi imibala iningi layo liwolintshi, lilandelwa luhlaza bese kuba ukusikisela okububende.
Futhi, kule nguqulo entsha ye I-Chrome 92 inweba ukuhlukaniswa kwesayithi. Lokhu kusebenza ikakhulukazi kuzandiso ukuze zingakwazi ukwaba izinqubo zodwa. Enguqulweni entsha, ukwahlukaniswa kwezengezo zesiphequluli kwenziwa ngokususa ngayinye kunqubo ehlukile, okwenze kwaba nokwenzeka ukudala esinye isithiyo sokuzivikela kuzengezo ezinonya.
Mayelana nezinguquko ezithile kunguqulo yedeskithophu, kuqokonyiswa lokho inketho yokusesha isithombe (into ethi «Sesha isithombe» kumenyu yokuqukethwe) ithuthele ekusebenziseni insiza yeGoogle Lens esikhundleni senjini ejwayelekile yokusesha yakwaGoogle. Ngokuchofoza inkinobho ehambisanayo kumenyu yokuqukethwe, umsebenzisi uzoqondiswa kabusha kuhlelo lokusebenza oluhlukile lwewebhu.
Ngaphandle kwalokho izixhumanisi zokuvakashela umlando zifihliwe kusixhumi esibonakalayo semodi ye-incognito (Izixhumanisi azisizi ngalutho, ngoba ziholele ekuvulweni kwesitokisi esinemininingwane yokuthi umlando awuzange uqoqwe).
Futhi banezela imiyalo emisha ehlukaniswe ngokuthayipha kubha yekheli. Isibonelo, ukuthola inkinobho esheshayo ekhasini ukuhlola iphasiwedi ne-plug-in security, vele uthayiphe u- "control security" bese uya kuzilungiselelo zokuphepha nokuvumelanisa: "phatha izilungiselelo zokuphepha" nokuthi "phatha ukuvumelanisa".
Ngakolunye uhlangothi, kuyabonakala ukuthi isigaba sokuqala sisetshenzisiwe ukunciphisa okuqukethwe kwekhanda le- "HTTP User-Agent", izexwayiso zokuphelelwa yisikhathi i-navigator.userAgent, i-navigator.appVersion, ne-navigator.platform manje zikhonjiswa kuthebhu Yezinkinga yama-DevTools.
Ngaphezu kwalokho, i-API ephatha amafayili yanikezwa ukubhalisa izinhlelo zokusebenza zewebhu njengabaphathi bamafayela. Isibonelo, uhlelo lwewebhu olusebenza ngemodi ye-PWA (Progressive Web Applications) enesihleli sombhalo lungabhaliswa njenge- ".txt" isibambi sefayela futhi singasetshenziswa kwimenenja yefayela yohlelo ukuvula amafayela wombhalo.
Futhi kufakwe ngekhono lokushintsha igama nesithonjana sezinhlelo zokusebenza ze-PWA (izinhlelo zokusebenza zewebhu eziqhubekayo).
Futhi ngenombolo encane engahleliwe yamafomu ewebhu ahlobene nokufaka ikheli noma inombolo yekhadi lesikweletu, njengokuhlola, ukuboniswa kwezincomo zokuqedela ngokuzenzakalela kuzokhutshazwa.
Ungayifaka kanjani iGoogle Chrome 92 kuLinux?
Uma unentshisekelo yokukwazi ukufaka le nguqulo entsha yalesi siphequluli sewebhu futhi namanje awunayo ifakiwe, ungalanda isifaki esinikezwa ngamaphakeji we-deb ne-rpm kuwebhusayithi esemthethweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Chrome 92 ifika nokuthuthuka ekutholeni ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, ukuhlukaniswa kwesayithi nokuningi